Zaikabe ho amin'ny fampananana asa sy fampivoarana ny tanora | Primature
Zaikabe ho amin’ny fampananana asa sy fampivoarana ny tanora
5 mai 2022 5 mai 2022 Aucun commentaire
Anisan’ny laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina ny fijerena ny tokony hanohanana ny tanora Malagasy hiatrika an’izao vaninandro ankehitriny izao. Araka izany dia tanterahina mandritra ny roa andro eny amin’ny CCI Ivato ny zaikabe ho amin’ny fampanana asa sy fampivoarana ny tanora, izay niarahan’ny governemanta, ny « Organisation Internationale du Travail – OIT » sy ireo sampan-draharaha maromaro ao amin’ny Firenena Mikambana miasa eto amintsika, ary ny Ivon-toerana mandinika momban’ny tanora.
Ny Praiminisitra Ntsay Christian, amin’ny maha-Lehiben’ny governemanta azy, no nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fanombohana no sady niahy ny hetsika; hetsika, araka ny notsipihiny, izay natao indrindra hanomezan-danja ny hoavin’ny tanora Malagasy, ary niorina tamin’ny lohahevitra « tanora iray, asa mendrika iray ».
Tanora misolo tena ny Faritra 23 eto Madagasikara no manatrika an’izao fihaonana izao, ary irariana, hoy ny Praiminisitra, mba handray anjara amin’ny dinika rehetra hatao ireto tanora ireto, hahafahana mandrafitra tetikasam-pirenena iray goavana hoentina hanabeazana, hampianarana, hanofanana, ary hampanana asa azy ireo, eny, mba ho tena tompon’andraikitra ankehitriny sy rahampitso.
Manao ezaka amin’ny fampivoarana ny tanora sy ny fampidirana azy ireo eo amin’ny seha-pihariana rehetra eto Madagasikara ny fitondram-panjakana, saingy « miankina amin’ny tanora tsirairay ny hoaviny », hoy ny Praiminisitra. Noraisina ho ohatra nanazavana an’izany ny dingana samihafa nanomboka tamin’ny fotoan’ny fahatanorana nolalovan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta nanatrika ny hetsika androany.
← Antenimierandoholona: Fivoriambe ara-potoana
CONSEIL DU GOUVERNEMENT du Mercredi 11 mai 2022 →
Fanazavana ny drafitra marolafy hiatrehana ny hamehana
Fidinana tany amin’ny faritra SAVA